समाचार - पैसा बचाउनुहोस् र चिन्ता गर्नुहोस्! कसरी सबैभन्दा उपयुक्त कैप्सूल प्रसाधन सामग्री झोला कन्फिगर गर्न?
एक "कैप्सूल कस्मेटिक झोला" के हो?
यो "क्याप्सुल वार्डरोब" जस्तै छ कि सबैले प्राय फोन गर्दछन्। यद्यपि यो कस्मेटिक झोला मा धेरै धेरै वस्तुहरु छैनन्, यो दैनिक मेकअप को लागी आवश्यक "आधारभूत वस्तुहरु" समावेश गर्दछ।
र यहाँ उत्पादनहरु ज्यादातर बहुमुखी र व्यावहारिक उत्पादनहरु छन्, र match्ग मिल्दो धेरै अतिरंजित छैन, जे होस् यो कसरी मिल्दो छ, यो "गर्जन मा कदम" को लागी सजिलो छैन।
एक सुव्यवस्थित "कैप्सूल कस्मेटिक झोला" मात्र मेकअप को समयमा उत्पादनहरु छनौट गर्ने प्रक्रिया लाई छोड्न सक्दैन, धेरै मेकअप को दक्षता मा सुधार, तर मेकअप स्पष्ट हुनु भन्दा पहिले हाम्रो सोच बनाउन।
निस्सन्देह, यो तपाइँ पैसा बचत हुनेछ यदि तपाइँ डुप्लिकेट वा अनावश्यक प्रकार्यहरु संग उत्पादनहरु छनौट गर्नुहुन्न!
एक पूरा कस्मेटिक झोला फाउन्डेसन, भौं पेन्सिल, eyeliner, आँखा छाया, काजल, लिपस्टिक, लाली र contouring, उत्पादन को यी 8 वर्गहरु सामेल छन्।
तेसैले, म उत्पादनहरु को प्रत्येक श्रेणी को लागी केहि सजीलै प्रयोग गर्न को लागी उत्पादनहरु को सिफारिश गर्दछु। तपाइँ मात्र एक छ कि तपाइँ प्रत्येक श्रेणी मा सूट छनौट गर्न को लागी आवश्यक छ।
कीवर्ड: प्राकृतिक, स्पष्ट, र अभिव्यक्त व्यापक मेकअप प्रभाव
चयन विधि: यस भाग मा आधार मेकअप उत्पादनहरु अधिक लचीला छन्, र तपाइँ कुनै विशेष मेकअप प्रविधिहरु को आवश्यकता छैन। तपाइँ मात्र तपाइँको छाला को प्रकार अनुसार छनौट गर्न को लागी आवश्यक छ।
पीएस यदि त्यहाँ कुनै उत्पादन छ कि तपाइँ सूट छैन, तपाइँ पनी "कीवर्ड" मा आधारित अन्य ब्रान्डहरु को उत्पादनहरु को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ।
कीवर्ड: लुकाउने शक्ति र नमी सहअस्तित्व, दाग छाला को लागी उपयुक्त
वास्तव मा, यदि तपाइँ अपूर्ण छाला मा एक सफा र निर्दोष मेकअप प्रभाव बनाउन चाहानुहुन्छ, तपाइँ जरूरी विशेष गरी बोझिला कदमहरु को आवश्यकता छैन-बलियो लुकाउने शक्ति र एक्स्टेन्सिबिलिटी संग एक तरल आधार छनौट एक विशेष तरीकाले कुशल तरीका हो।
समान रूपमा यो तरल आधार फैलाए पछि, यो एक अधिक प्राकृतिक "मलाईदार छाला" प्रभाव छ। जे होस् अधिकारीले भने यो धेरै सुक्खा र सुख्खा छाला संग मिसाइएको छ, तैलीय छाला सेट पछि मेकअप हटाउन सजिलो छैन।
सामान्य असमान छाला टोन, डार्क सर्कल, मुँहासे को निशान र अन्य साना blemishes को लागी, यो फाउन्डेशन सजिलै संग ढाक्न सक्छ।
यो भौं पेंसिल को रंग मध्यम खैरो छ, र रिफिल सजीलै प्राकृतिक र ज्वलन्त "जंगली भौं" को एक जोडा आकर्षित गर्न को लागी पर्याप्त पातलो छ।
नुकीली भौं पेंसिल को आफ्नो पुरानो संस्करण संग तुलना, "Machete भौं पेन्सिल" को यो नयाँ संस्करण सञ्चालन मा अधिक लचीला हुनेछ।
यसबाहेक, यो भौं पेंसिल को रिफिल कठोरता मा मध्यम छ, जो एक "जरा" प्रभाव कोर्न को लागी कलम को टिप को उपयोग को लागी विशेष गरी उपयुक्त छ। Xiaobai प्रयोग गर्न को लागी कुनै दबाब छैन!
बरौनी प्राइमर र काजल
कीवर्ड: सफा, प्रकाश
चयन विधि: प्राइमर कि नग्न मेकअप मनपर्छ पर्याप्त छ; यदि तपाइँ लामो र अधिक देखिने eyelashes चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक साथ दुई को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ; दाताहरु जो पनरोक मस्करा हटाउन मन पर्दैन सीधै काजल छनौट गर्नुहोस्।
यसको पेस्टमा धेरै फाइबर छन् कि eyelashes लम्बाउन सक्छ। पनी कालो कालो, रंग एक निश्चित ग्रे स्केल छ, र चित्र को प्रभाव एक प्राकृतिक "बरौनी सार" जस्तै छ।
नियमित काजल संग तुलना, यो उत्पादन को प्रभाव अधिक प्राकृतिक छ, र यो अनुवर्ती मा बेहोश गर्न को लागी सजिलो छैन। यो विशेष गरी साना परियों को लागी "हात" गर्न को लागी सजिलो छ जब आफ्नो पलकहरु ब्रश गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ!
कीवर्ड: ठीक रिफिल, चिकनी लाइनहरु
चयन विधि: तरल eyeliner कलम द्वारा तैयार लाइनहरु तेज र अधिक नाजुक छन्, र जेल eyeliner कलम प्रकाश मेकअप मनपर्ने बहिनीहरु को लागी अधिक उपयुक्त छ।
यद्यपि यसको मूल्य सस्तो उत्पादनहरु को बीच सस्तो मानिन्छ, यो रंग प्रतिपादन, पानी को चिकनीपन र निब को सुंदरता को मामला मा महंगा उत्पादनहरु संग तुलनात्मक छ।
दुबै कालो र खैरो दैनिक मेकअप को लागी उपयुक्त रंग हो। र यो एक को खैरो रंग अपेक्षाकृत हल्का छ, त्यसैले पनि "विकलांग पार्टी" सजीलै संग यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ
कीवर्ड: पृथ्वी रंग, मध्यम रंग प्रतिपादन
चयन विधि: आंखों को छाया चित्रकला को अतिरिक्त, बहु रंग प्यालेट पनि समोच्च को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। निम्न ३५ र color प्यालेट रंगहरु को एक अमीर चयन छ र सस्ता छ।
यदि मँ मात्र ड्रेसिंग टेबल मा eyeshadows को एक सेट छोड्न सक्नुहुन्छ, तब मेरो छनौट निश्चित रूप मा सबैभन्दा आधारभूत र एकै समयमा सबैभन्दा बहुमुखी "पृथ्वी रंग" हुनेछ।
यो "सानो खैरो किताब" न केवल केहि म्याट ब्राउन कि रूपरेखा को भावना accentuate गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो पनि उज्यालो को लागी ग्रे र अफ-सेतो को स्पष्ट रंगहरु छन्।
हल्कापन र तल ट्रिमिंग रंग को संतृप्ति मध्य स्थिति मा छन्, र यो पनि एक लाली को रूप मा प्रयोग गरीन्छ जब विशेष छ।
र यो पनि एक "मोती फट" बनावट संग एक हल्का सुनको खैरो, जो आँखा सजाने पछि धेरै स्मार्ट देखिन्छ, र तपाइँ स्पष्ट तहहरु र उज्यालो धब्बा संग एक सुन्दर आँखा मेकअप रंग गर्न सक्नुहुन्छ।
लिपस्टिक र होंठ चमक
कीवर्ड: बहुमुखी रंग, चिकनी बनावट र धब्बा गर्न को लागी सजिलो
छनौट विधि: मलाईदार लिपस्टिक थोरै मॉइस्चराइजिंग छ, र नरम धुंध जस्तै परियों ओठ माटो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अनुचित छैन कि यो लिपस्टिक यति लामो समय को लागी लोकप्रिय हुन सक्छ-किनकि यो रंग साँच्चै प्राकृतिक र स्वभाव हो
पहिलो नजर मा, यसको रंग तातो र नग्न छ, तर यो मुख मा राखे पछि, यो साधारण "खाने माटो रंग" को रूप मा नियन्त्रण गर्न को लागी गाह्रो हुनेछैन। यसको विपरित, यो स्वाभाविक रूप देखि ओठ को खूनी भावना बढाउन सक्छ।
मलाईदार क्रीम मुख को पछाडि एक निश्चित कभरिंग शक्ति छ, र गहिरो होंठ कोटिंग को लागी अतिरिक्त प्राइमर को लागी कुनै आवश्यकता छैन।
विशेषता यो हो कि बनावट विशेष रूप देखि चिकनी छ, जो न केवल मैट र फ्रोस्टेड नरम र ओठ माटो को धुंधला मेकअप प्रभाव को बरकरार राख्छ, तर यो पनि सुख्खापन को कारण सुक्खा भावना लाई बचाउँछ।
कीवर्ड: मध्यम रंग प्रतिपादन, धेरै उच्च रंग संतृप्ति छैन
यो लाली एक नाजुक चमक छ र बहुमुखी छ र picky छैन। यो तिनीहरुको मोनोक्रोमेटिक ब्लश मा नयाँ रंग नम्बर हो। गुलाबी आडू रंग धेरै मीठो र वातावरण देखिन्छ, र यो पनि सामान्य पृथ्वी रंग आँखा मेकअप जस्तै छ। धेरै राम्रो मिलान।
यो एकल र bl ब्लश को अतिरिक्त, धेरै ठूलो नाम एकल रंग blushes पनि अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ।
कीवर्ड: हल्का रंग, विभिन्न टोन सहित
यद्यपि ट्रिमिंग र हाइलाइटिंग को लागी चरणहरु सरल छन्, प्रयोग र अप्रयुक्त को बीचको फरक साँच्चै धेरै नराम्रो छ!
यो धेरै सुविधाजनक छ "उच्च चमक ट्रिमिंग सबै मा एक डिस्क" को उपयोग गर्न को लागी, र यो सीधा एकल रंग मा "एक डिस्क को संयोजन" को चरण छोड्छ।
तर यो प्लेट को समग्र रंग अपेक्षाकृत हल्का छ, र प्रकाश र अँध्यारो को बीच कन्ट्रास्ट धेरै बलियो छैन। यदि तपाइँ एक गाढा छाला टोन छ, तपाइँ पनि यस उत्पादन को विचार अनुसार अन्य प्लेटहरु को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ।
पोस्ट समय: अगस्त-१०-२०२१
आँखा कालो, लिपग्लास, बरौनी विस्तार, बरौनी विक्रेताहरु, eyeliner, मिंक पलक,